PHOTOS. Læticia Hallyday waxay ku amaaneysaa dharka polka dhibic ee ballanteeda iyada iyo qareenkeeda cusub ee Paris - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE PHOTOS. Læticia Hallyday waxay ku amaanaysaa dharka polka dhibic ee ballanteeda iyada iyo qareenkeeda cusub ee Paris
Ku laabashada faransiiska. Tan iyo Sebtember 16, Læticia Hallyday ayaa ku soo noqotay Paris si loo maareeyo mashaariicda cusub ee ka soo bixi doona shaqada Johnny Hallyday. Arbacadii, Sebtember 18, carmalkiisa waxay ka faa'iideysteen dib ula midoobida mid ka mid ah asxaabtiisa ugu fiican ka hor intaadan aadin xafiiska qareenka cusub. Waa marki ugu horeysay oo uu la qaato macalin Pierre Pradier, Læticia Hallyday waxay doorteen dhar jilicsan oo dheer oo leh dhibco cad oo dhegaha lagu dhejiyay iyo laba kabood oo kabo cayn ah.
Muraayadda muraayadaha indhaha sanka, hooyada Jade iyo Joy u muuqday mid ku faraxsan magacaabiddan. Xusuusin ahaan, Læticia Hallyday waxay go’aansatay inay badasho qareenada dhammaadkii bishii Luulyo ee la soo dhaafay. Markaa way iga erysay Ardavan Amir-Aslan, kaasoo isdifaacayay ilaa iyo Janaayo 2018, oo uu kiraystay seddex guddi oo cusub. Markaa waa khabiirka cashuuraha Pierre Pradier kaasoo matali doona danahiisa dagaalka sharci ee isaga ka gees ah odayaasha Johnny. Waxay kaloo go'aansatay inay aaminto qareenada Montpellier, Alain Scheuer iyo Gilles Gauer. Xulasho aan lahayn wax fursad ah
Runtii, talo cusub oo ka socota Læticia Hallyday way ka sarreeyaan ... kuwa aabihiis. 18 Sebtember waddooyinka magaalada Paris, André Boudou ayaa lagu arkay dhinaca sayidku Gilles Gauer. Intii aan ku suganahay Paris si aan u daryeelo DVD-yadii ku saabsanaa qulqulaha Taulier ee iyagu baxaya, Læticia Hallyday sidaa darteed hubaal wuxuu ka hadlay dhagaysiga ku xigga kooxdiisa sharci ee cusub. 6 ee soo socota ee Nofembar ayaa qaban doonta wicitaanka kiiskii dhaxalka ee Johnny Hallyday.
© Wakaaladda / Wanaagsanaanta
Laeticia Hallyday waxay ka tagaysaa xafiiskeedii qareenkeeda Paris 18 Sebtember 2019. Qareenkiisa cusub Ma
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/photos-l-ticia-hallyday-sublime-dans-une-robe-a-pois-pour-son-rendez-vous-avec-s-1024565